(၂၁) ရာစုပင်လုံ တတိယ အစည်းအဝေးတွင် ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ဆိုင်ရာ အချက်ကို ဆွေးနွေးနိုင်ဦး? - Yangon Media Group
(၂၁) ရာစုပင်လုံ တတိယ အစည်းအဝေးတွင် ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ဆိုင်ရာ အချက်ကို ဆွေးနွေးနိုင်ဦး?
ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ (၂၁)ရာစုပင်လုံ တတိယအစည်းအဝေးတွင် ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ဆိုင်ရာအချက်ကို ဆွေးနွေးနိုင်ဦးမည်မဟုတ်ဟု UPDJC အတွင်းရေးမှူး အဖွဲ့ဝင်ဦးခင်ဇော်ဦးက ပြောသည်။ ဇွန် ၁၉ ရက်က နေပြည်တော်ရှိ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဗဟိုဌာနတွင် ကျင်းပသည့် ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ (၂၁)ရာစုပင်လုံ တတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးအား လာမည့်ဇူလိုင်ဒုတိယပတ် အတွင်းကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် အစိုးရ၊ လွှတ်တော်၊ တပ်မတော်အစုအဖွဲ့များ အကြိုပြင်ဆင်ရေးဆွေးနွေးပွဲ၌ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားရာတွင် ၎င်းက အထက်ပါအတိုင်း ပြောခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အပစ်ရပ်လက်မှတ်ထိုးထားသည့် EAO အစုအဖွဲ့နှင့် အလွတ်သဘော တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု လေးကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ရာတွင် အားရလောက်သည့်အဖြေမရရှိခဲ့ကြောင်း UPDJC အတွင်းရေးမှူး အဖွဲ့ဝင် ဦးခင်ဇော်ဦးကပြောသည်။ ”နိုင်ငံရေးကဏ္ဍမှာဆိုရင် အခုကျန်ခဲ့တဲ့ခွဲမထွက်ရဆိုတဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ဆိုတာ အခုထိ ကျွန်တော်တို့ကျော်လို့မရသေးဘူး။ သူတို့နဲ့ညှိနှိုင်းချက်အရဆိုရင် ဒီဟာကို ခဏချန်ထားခဲ့ရဦးမယ့် အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်” ဟု ၎င်းကဆိုသည်။ ယင်းအပြင် EAO အစုအဖွဲ့ဘက်မှ တိုင်းရင်းသားလူနည်းစု အခွင့်အရေးကာကွယ်ပေးခြင်းဆိုင်ရာခေါင်းစဉ်နှင့် အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးနှင့် ကျားမတန်းတူညီမျှရေးခေါင်းစဉ်တို့ဖြင့် ခေါင်းစဉ်နှစ်ခုကို ဆွေးနွေးချင်သည်ဟု တင်ပြထားကြောင်း၊ နိုင်ငံရေးကဏ္ဍတွင် ဖက်ဒရယ်ကို ထင်ဟပ်စေနိုင်မည့် ဆွေးနွေးမှုမှာလည်း အားနည်းနိုင် ကြောင်း ၎င်းကဆက်လက်ပြောသည်။
သို့သော်လည်း လုံခြုံရေးနှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်များကို ယခင်အစည်းအဝေးများတွင် မဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့သော်လည်း ယခုလာမည့် တတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် ပါဝင်လာနိုင်ကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။ ”လုံခြုံရေးကဏ္ဍအနေနဲ့ကတော့ အလွတ်သဘောဆွေးနွေးချက် သုံးလေးချက်လောက်လုပ်ကြည့်ပါတယ်။ လုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်း တစ်ခုတည်းသော တပ်မတော်ဆိုတဲ့ Cornset ကိုလက်ခံဖို့ တော်တော်ညှိယူရတဲ့ အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အခုနောက်ဆုံး ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က လုပ်ခဲ့တာကတော့ တစ်ခုတည်းသော တပ်မ တော်ထားရှိရေးဟာ Universal- Truth ဖြစ်တယ်။ သူတို့လက်ခံပါတယ်လို့တော့ ပြောပါတယ်။ EAO အနေနဲ့။ သို့သော် ဒီတစ်ခုတည်း သောတပ်မတော်မှာရှိရမယ့် အချက်တွေက ဘာတွေလဲဆိုတာကိုတော့ ဆက်ဆွေးနွေးမယ်လို့ဆိုပါတယ်” ဟု ၎င်းကဆက်လက်ပြောသည်။
ယင်းအတွက်ကြောင့် တတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် လုံခြုံ ရေးကဏ္ဍနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးရန် အချက်နှစ်ချက်၊ သုံးချက်ခန့် ပါဝင်လာနိုင်ကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။ ”EAO တွေအဆိုပြုတဲ့ရက်နဲ့ အစိုးရအဆိုပြုတဲ့ရက် ကြားထဲ လောက်မှာ ညှိနှိုင်းပြီးတော့ အခု ဇွန်လကုန် ဇူလိုင်လထဲမှာပဲ ညီလာခံကျင်းပဖြစ်မှာပါ” ဟု ၎င်းက မီဒီယာများသို့ပြောသည်။ ယင်းအပြင် EAO အစုအဖွဲ့များနှင့် ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း တရားဝင်တွေ့ဆုံသွားရန်လည်းရှိကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောသည်။
မွေးနေ့ရှင်၏ အလိုချင်ဆုံးဆုက ပြည်သူများ နှလုံးစိတ်ဝမ်း အေးချမ်းရေးဟု နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပ
မြန်မာ – ထိုင်းနယ်စပ် သောင်ရင်းမြစ်ပေါ်၌ တစ်လတာ ကျင်းပသည့် ရေပေါ်ဈေးသို့ နှစ်နိုင်ငံပြည်သူမ?